Battery - Androidsis | Androidsis (Pejy 2)
Fantaro ny momba ny famandrihana tsy misy tariby amin'ny Android, inona izany ary ny fomba fiasan'izy ireo ankoatry ny telefaona mifanaraka aminy.
Ahoana ny fomba fanerena hamerina ny finday Android amin'ny bateria tsy azo esorina
Jereo ny fomba ahafahanao mamerina mamerina ny findainao Android raha manana finday misy bateria tsy azo esorina amin'ny fomba tena tsotra ianao.
Torohevitra hialana amin'ny famoahana bateria mandritra ny dia lavitra
Jereo ireo fikafika ireo mba tsy ho lany ny herinao bateria amin'ny telefaona Android anao mandritra ireo fialantsasatra Krismasy manaraka ireto.
Zavatra bateria tokony hotadidina rehefa mividy telefaona Android
Jereo ireo lafin-javatra ireo momba ny bateria izay tsy maintsy dinihinao rehefa handeha hividy telefaona Android vaovao ianao.
Karazana bateria amin'ny telefaona Android
Fantaro bebe kokoa momba ny karazana bateria isan-karazany amin'ny Android ankehitriny, miampy vitsivitsy izay eo am-pandrosoana izao.
Ahoana ny fampitomboana ny bateria amin'ny Android amin'ny fanitsiana tsotra
Jereo ny fanitsiana tsotra amin'ny safidin'ny mpamorona ahafahantsika mampihena ny fanjifana bateria amin'ny telefaona Android.
Avereno jerena ny bateria azo entina Mbuynow YN-035P
Izahay dia mametraka ny batterie ivelany Mbuynow amin'ny fanandramana, mahazaka 20.000 7 mAh afaka mameno ny finday avo lenta hatramin'ny XNUMX isaky ny misy anao
Miankina amin'ny inona ny fizakantenan'ny finday Android?
Fantaro bebe kokoa momba ireo lafin-javatra izay misy fiantraikany amin'ny androm-piainan'ny finday Android sy ny zava-dehibe tokony ho fantatra.
Mophie dia mandefa tranga bateria ho an'ny Galaxy Note 9
Ny mpanamboatra caster bateria Mophie dia nampiditra ny caster bateria Juice Pack ho an'ny Samsung Galaxy Note 9
Ny fiainana bateria an'ny telefaona vaovao sasany dia niharatsy raha oharina amin'ireo teo alohany
Ny fahombiazan'ny bateria amin'ireo fitaovana vaovao dia nidina avy teo alohany. Manome anao ny angon-drakitra navoakan'ny fitsapana izahay.
Ahoana ny fomba hilazana raha tsara ny bateria findainao Android
Jereo ny fomba azonay ahafantarana raha toa ka milamina tsara ny batterin'ny finday Android. Fomba roa maimaim-poana 100%.
Ny batterie graphene vaovao an'ny Samsung dia hameno ny Galaxy Note 5 10 heny haingana kokoa
Ny bateria graphene dia midika fa handoa 5 heny haingana kokoa noho ny bateria lithium-ion mahazatra izy io. Fahombiazana iray avy amin'ny Samsung hanovana ny tsena.
Avereno jerena ny OUKITEL WP2, ilay henjana miaraka amin'ny bateria tsy manam-petra
Napetrakay tamin'ny andrana ny OUKITEL WP2, finday avo lenta "all-terrain" miaraka amin'ny fanamarinana IP68 ary bateria 10.000 mAh lehibe, aza hadino izany!
Galaxy Note 9 mamafa ny iPhone XS Max amin'ny fitsapana ny fiainana bateria
Ny fitsapana ny bateria izay nanaovana ny Galaxy Note 9 sy ny iPhone XS Max, asehoy anay fa ny Samsung Smartphone no mpandresy mazava
Huawei dia nanambara bateria lithium-silicon ho an'ny findainy miaraka amin'ny fanatsarana ny famandrihana haingam-pandeha
Huawei dia nanambara karazana bateria vaovao: Lithium-Silicon. Ireo dia tsara lavitra noho ny Lithium-Ion ankehitriny.
Ny Xiaomi Mi A2 dia miaina olana amin'ny bateria
Olana amin'ny fanjifana bateria amin'ny Xiaomi Mi A2. Fantaro bebe kokoa ny lesoka niainanao tamin'ny telefaona niaraka tamin'ny bateria.
[APK] Ahoana ny fomba hampiasana ny lohahevitra maizina amin'ny Gboard rehefa ampiharina ny mpamonjy bateria
Ao amin'ny kinova farany an'ny Gboard, ny lohahevitra maizina dia azo alefa ho azy izao rehefa voafantina ny fomba fitehirizana bateria Android.
OUKITEL K7 Power: Ilay maodely vaovao miaraka amin'ny bateria 10.000 mAh
OUKITEL K7 Power: ny afovoany vaovao an'ny marika. Fantaro bebe kokoa momba ity elanelam-potoana vaovao ity amin'ny marika sinoa izay hamely ny tsena amin'ity volana ity.
Huawei dia manolotra bateria azo averina indray ho an'ny olona milahatra mividy iPhone XS
Ilay mpanamboatra aziatika Huawei dia nanararaotra ny filaharana an-tsokosoko ao amin'ny Apple Store mba hanomezana bateria 200 mAh azo haverina 10.000
Ahoana no hahalalanao ny fotoana lanian'ny bateria amin'ny Android
Ahoana no hahalalana hoe hafiriana no andefasana ny baterinao Android. Fantaro bebe kokoa momba ireo fomba roa hahitana ny fotoana ilainao.
Ahoana ny fanjifana bateria kely kokoa amin'ny Android rehefa mampiasa WiFi
Ahoana ny fomba hitsitsiana bateria amin'ny Android raha mampiasa WiFi. Mamitaka bateria kely kokoa raha mampiasa WiFi amin'ny telefaona Android.
Wiko View 2 Go: famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro bebe kokoa momba ny ambany farany ambany an'ny marika atolotra ao amin'ny IFA 2018.
Ny bateria an'ny Galaxy Note 9 dia azo antoka, hoy i Samsung
Ny bateria Samsung Galaxy Note 9 dia azo antoka kokoa noho ny hatramin'izay. Fantaro ireo dingana noraisin'ny orinasa hiarovana ny bateria.
Ny Huawei Mate 20 dia hanana bateria 4.200 mAh
Ny Huawei Mate 20 dia hanana bateria 4.200 mAh. Fantaro misimisy kokoa momba ny haavo farany ambony an'ny marika sinoa ho tonga amin'ity fararano ity.
AUKEY dia manolotra "miaraka hatrany amin'ny bateria amin'ny finday"
Izahay dia nanandrana fonosana AUKEY feno mba hahafahan'ny bateria finday avo lenta mahatanty ny karazany mandritra ny fialantsasatra, azo antoka fa ho tonga mora ampiasaina ny iray amin'izy ireo.
Ny Honor Note 10 dia hanana bateria 5.000 mAh
Ny Honor Note 10 dia hanisy bateria 5.000 mAh. Fantaro bebe kokoa momba ny batterie izay hananan'ny telefaona vaovao avy amin'ny mpanamboatra sinoa.
Ny Galaxy Note 9 dia hanana bateria 4.000 mAh
Ny baterian'ny Samsung Galaxy Note 9 dia ho 4.000 mAh. Fantaro bebe kokoa momba ny batterie izay hanana ny faran'ny marika Koreana.
Ny telefaona Samsung azo ahodina dia hanana bateria azo aforitra
Ny telefaona finday Samsung dia hampiasa bateria azo aforitra. Fantaro bebe kokoa momba ny bateria hampiasain'ny Samsung Galaxy X.
Energizer Hardcase H500S: ny telefaona matanjaka vaovao avy amin'ny orinasa misy bateria 3000mAh
Energizer, mpanamboatra bateria, jiro ary fitaovana hafa malaza, dia nanolotra smartphone vaovao mifantoka, mihoatra ny enEnergizer izay vao haingana no nanolotra ny Energizer Hardcase H500S, finday avo lenta ambany miaraka amina endrika somary minimalista ary bateria 3000mAh.
Ny injenieran'ny OUKITEL dia manosika mafy: vonona handefa OUKITEL K7 miaraka amin'ny bateria 10.000mAh
Amin'ny 19 Jona dia azonao atao ny mividy ny OUKITEL K7 sy ny bateriny 10.000mAh amin'ny varotra manerantany voalohany. Azonao atao ny manangona $ 30 amin'ity coupon ity.
Ny bateria an'ny Galaxy Note 9 dia ho 4.000 mAh
Araka ny fivoahana farany, ny Galaxy Note 9 dia hamely ny tsena amin'ny bateria 4.000 mAh, iray amin'ireo fitakian'ny mpampiasa ny orinasa Koreana.
[Lahatsary] Ny OUKITEL K7 miaraka amin'ny bateria 10.000mAh dia mandalo fizahana fizakan-tena
Miresaka momba ny OUKITEL K7 izahay, finday ara-toekarena sy matanjaka tonga miaraka amina bateria 10000mAh goavambe izay milaza fa, na eo aza ny bateria goavana entiny ao anatiny, dia hahasoa kokoa ny vidiny ary tsy hampandefitra ny asany na ny asany. an'ny fakantsary
Ahoana ny fampiasana hery restart amin'ny finday avo lenta amin'ny bateria tsy azo esorina
Ahoana ny fanerena ny famerenana amin'ny laoniny telefaona amin'ny bateria tsy azo esorina. Fantaro ny fomba fampiasana an'io fiasa io amin'ireo telefaona izay tsy manana bateria azo esorina mahazatra.
OUKITEL K7: Ny finday avo lenta mora indrindra miaraka amin'ny bateria 10.000 mAh
OUKITEL K7: Ny telefaona vaovao miaraka amin'ny bateria 10.000 mAh. Fantaro bebe kokoa momba ny fitaovana vaovao an'ny marika izay misongadina amin'ny batterie lehibe ananany.
360 N7, eo afovoany misy bateria 5030mAh lehibe natomboka
360 Mobiles dia nanolotra ny 360 N7 tany Shina tamin'ny endriny, mpikambana vaovao ao amin'ny katalaoginy izay tapa-kevitra amin'ny sehatra iray manana fangatahana antonony noho ny toetrany sy ny famaritana antonony.
Hihaona amin'ny Ulefone Power 5, finday misy bateria 13000mAh goavambe
Ulefone, ny orinasa aziatika, dia mitondra antsika Ulefone Power 5, terminal Android midadasika miaraka amina bateria 13.000mAh goavambe izay mampanantena antsika hampiasaina mandritra ny andro maromaro nefa tsy mila miahiahy momba ny charger sy ny plug. Atolotray anao izany!
Atolotray anao ny Bluboo S3, izay misy terminal sy toetrany manokana efa fantatra nandritra ny andro maromaro izao, ary ho azo amidy amin'ny alàlan'ny Banggood manomboka rahampitso 18 aprily amin'ny vidiny ambany noho ny 165 euro.
Blackview P10000 Pro: bateria 11.000 mAh misy fanjifana ambany
Blackview P10000 Pro: Mandehana ny fitsapana ny fanjifana bateria. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona izay efa nandalo ity fitsapana bateria ity ary mandalo tsy misy olana.
Ny Smartisan Nut 3 dia aseho amin'ny batterie 4000mAh goavambe
Smartisan dia mitondra antsika ny Smartisan Nut 3, finday vaovao izay tonga miaraka amina endrika kanto sy manintona 7.16mm fotsiny ny hateviny, ary manana bateria 4.000mAh goavambe izay, tsy isalasalana, hanome antsika fahaleovan-tena tsara hahatonga antsika adinoy ny plug sy ny charger mandritra ny fotoana fohy
Archos Saphir 50X: Ilay finday goavambe vaovao misy bateria lehibe
Archos Saphir 50X: famaritana, vidiny ary fandefasana. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona goavambe vaovao avy amin'ny marika frantsay izay efa amidy amin'ny fomba ofisialy any Eropa.
Ny Samsung Galaxy Note 9 dia afaka mitondra bateria efa ho 4000mAh
Ny Galaxy Note 9 dia hanana bateria 3.850 mAh. Fantaro bebe kokoa ny fahaizan'ny bateria finday avo lenta an'ny marika izay hamely ireo magazay amin'ny tapaky ny taona.
Nubia V18: Ny elanelam-potoana vaovao misy bateria lehibe
Nubia V18: famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy. Hijery misimisy kokoa momba ny finday vaovao afovoany marika vaovao manomboka any Chine amin'ity volana ity.
Blackview P10000 Pro: efijery 18: 9 ary bateria 11.000 mAh
Blackview P10000 Pro: Voamarina aloha ny fepetra manokana. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona vaovao avy amin'ny marika sinoa haseho amin'ny fomba ofisialy afaka andro vitsivitsy.
Ireo rindranasa ireo no mahatonga ny olana amin'ny bateria sy be indrindra
Ireo rindranasa izay miteraka olana amin'ny fahombiazana indrindra amin'ny bateria. Jereo ity lisitra ity miaraka amin'ireo rindranasa izay miteraka olana betsaka indrindra amin'ny resaka fampisehoana sy batterie amin'ny telefaoninao. Misaotra tamin'ny fandalinana Avast
Atolotray anao ny Nubia N3, finday kanto misy bateria 5000mAh
Ny Nubia N3 dia vao natolotra bateria lehibe 5.000 6.01 milliamp izay hanome antsika fahaleovan-tena tsy azo iadian-kevitra, miaraka amin'ny efijery 18-inch amin'ny endrika 9: XNUMX, ary ireo fiasa maro hafa izay hametraka izany amin'ny fifandiran'ny salantsalany amin'ity taona ity. Mahalalà azy!
HOMTOM HT70: finday manify indrindra miaraka amina bateria 10.000 mAh eny an-tsena
HOMTOM HT70: bateria 10.000 mAh amin'ny telefaona manify indrindra. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona vaovao an'ny marika izay hatomboka amin'ny volana aprily.
Ny orinasa amerikanina Energizer, dia manolotra ny Energizer Hardcase H570S, finday avo lenta voalohany misy efijery FullHD + 18: 9 5.7 ary kapila batterie 4.800mAh goavana. Ity terminal ity dia misy fanamarinana IP68, Soat Mediatek MT6739 quad-core SoC, 3GB RAM, ary maro hafa.
Ny OUKITEL WP5000, finday avo lenta finday miaraka amin'ny bateria 5.000 mAh, fanoherana IP68 ary efijery 18: 9
Ny terminal OUKITEL vaovao kendrena amin'ireo mpampiasa be mpitady indrindra dia ny WP5000, maodely iray izay tsy mahatohitra ny hatairana, ny rano ary ny vovoka tsy mikororosy, fa manome bateria 5.000 18 mAh sy efijery 9: XNUMX
ASUS Zenfone Max M1: Ny ASUS vaovao miaraka amin'ny bateria lehibe dia naseho tao amin'ny MWC
ASUS Zenfone Max M1: famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona ASUS vaovao naseho tao amin'ny MWC 2018.
Ny fiainana bateria an'ny Galaxy S8 sy S8 + dia tena mitovy amin'ny an'ny Galaxy S9 sy S9 +
Ny tarehimarika fanjifana bateria ofisialy natolotry ny Galaxy S9 vaovao sy ny Galaxy S9 dia mitovy amin'ny hitantsika teo alohany, afa-tsy ny fanjifana bateria rehefa milalao mozika.
Hihaona amin'ny Energizer Hardcase H590S, finday misy batterie 5800mAh
Ny orinasa frantsay Avenir Telecom, dia nanambara ny Energizer Hardcase H590S, finday avo lenta manana ny toetrany sy ny pitsony teknika mendrika ny antonony miaraka amin'ny bateria misy, tsy misy mihoatra ary tsy latsak'izany, 5.800mAh. Mahalalà azy!
Energizer Power Max P16K Pro, finday misy bateria 16000mAh izay haseho ao amin'ny MWC any Barcelona
Hihaona amin'ny Energizer Power Max P16K Pro, finday iray izay tsy nanasongadinana ny fizakan-tenany ny mpanamboatra, ary izany dia, araka ny filazan'ny orinasa bunny herinaratra, ny P16K dia mampanantena mihoatra ny herinandro miaraka amin'ny fampiasana antonony izay ataontsika fa tsy mila miahiahy momba ny plug isika. Manitatra anao izahay!
Ulefone dia nanamafy fa efa miasa amin'ny mpandimby ny Power 3 ... Izy io dia ny Ulefone Power 3 Max, terminal mahery izay ho tonga miaraka amin'ny bateria 13.000mAh goavambe hiatrehana ny fitakianay rehetra na inona na inona fandehan'ny fotoana. Manitatra anao izahay!
Ny OUKITEL K10 miaraka amin'ny bateria 11.000 mAh dia manome antsika 21 horonan-tsary tsy tapaka
Ny OUKITEL K10 dia terminal iray izay manome bateria 11.000 mAh ho antsika, bateria ahafahantsika milalao horonantsary amin'ny alàlan'ny famoahana amin'ny famirapiratana sy feo fatratra mandritra ny 21 ora mahery.
Ny Hisense P9 dia hita ao amin'ny TENAA miaraka amin'ny bateria 6000mAh sy ny efijery AMOLED 5.5-inch
Ny finday avo lenta mahatohitra, ny Hisense P9, dia hita ao amin'ny TENAA, ary efa ananantsika ny antsipiriany rehetra momba ity finday ity izay afaka mahita ny hazavan'ny CES any Las Vegas amin'ny andro ho avy. Mahalalà azy!
Hihaona amin'ny Energizer Power Max P600S, finday misy batterie 4500mAh
Energizer dia nanomana terminal terminal antonony manana bateria 4500mAh goavambe, izany dia ny Power Max P600S, finday izay hitantsika eny an-tsena amin'ity volana ity. Lazainay anao daholo ny momba azy!
OUKITEL K10: Ny finday avo lenta voalohany misy bateria 11.000 mAh
OUKITEL K10: Hihaona amin'ity smartphone ity miaraka amin'ny bateria 11.000 mAh. Hijery misimisy kokoa momba ny smartphone OUKITEL vaovao izay hamely ny tsena tsy ho ela.
Samsung dia namoaka kinova vaovaon'ny Tizen 3.0 nohavaozina mba hamahana ireo olan'ny bateria izay manelingelina fitaovana sasany.
HTC sy Motorola dia nilaza fa tsy mampihena ny telefaonin'izy ireo taloha. Hijery misimisy kokoa momba ny fanambaran'ireo orinasa roa ireo taorian'ny tantara ratsy nataon'ny Apple.
Ny efijery mandrakariva ary herintaona bateria no omen'ny Garmin Vivofit 4 vaovao antsika
Ny fehin-tànana manisa dia nanjary lamaody ho fanomezana mahazatra, indrindra amin'ny Krismasy, noho ny ...
Mangatsiaka ny Samsung Galaxy Note 8 sasany rehefa lany ny bateria
Ny Galaxy Note 8 dia mijaly amin'ny olan'ny bateria amin'ny maodely sasany. Fantaro misimisy kokoa ny momba ireo olana atrehin'ny telefaona amin'ny bateria tsy andoavam-bola,
Oukitel K10, finday avo lenta misy bateria 11.000 mAh maharitra herinandro
Oukitel dia hamidy ny K10 amin'ny fiandohan'ny taona ho avy, terminal iray misy bateria 11.000 mAh izay tsy ilaina intsony ny mampiakatra azy ao anatin'ny herinandro
Blackview P6000, terminal mahery misy bateria 6180mAh
Ny Blackview P6000 dia ho avy amin'ity volana desambra ity miaraka amin'ny bateria 6180mAh mahatalanjona hiaretana ny fitakianay rehetra mba tsy hianjera amin'ny andro.
Samsung dia miasa amin'ny batterie graphene miaraka amin'ny faharetana lava kokoa
Samsung dia mamorona batterie graphene izay maharitra ela kokoa. Fantaro bebe kokoa momba ny fampivoarana ny batterie amin'ity fitaovana ity an'ny orinasa.
Haneho anao ny bateria navelanao marimarina kokoa i Google
Haneho anao ny bateria navelanao tsara kokoa i Google. Fantaro ny momba an'ity zava-baovao ity amin'ny telefaona Android.
Ny tetika tsara indrindra hamonjy bateria amin'ny Android
Ny tetika tsara indrindra hamonjy bateria amin'ny Android. Jereo ity safidin-tsolika ity hiarovana ny fiainana bateria amin'ny Android.
Android 8.1. Mampitandrina anao i Oreo raha misy fampiharana manala ny baterinao
Android 8.1. Mampitandrina anao i Oreo raha misy fampiharana amin'ny findainao izay mandany ny baterinao. Fantaro ny fomba.
Torohevitra hikarakarana ny baterinao Android miampy fampiharana mahavariana
Ireto misy torohevitra vitsivitsy hikarakarana ny baterinao Android miampy fampiharana iray izay tena ilaina tokoa amin'ny fitantanana ny fiampangana azy.
Smartphone 6 miaraka amin'ny bateria lehibe izay safidy tsara amin'ny fividianana
Raha mitady finday mora vidy ianao miaraka amin'ny bateria lehibe dia ampahafantarinay ny tolotra sy telefaona tsara indrindra azonao jerena androany.
OUKITEL K8000 ny finday avo lenta miaraka amin'ny bateria lava indrindra eny an-tsena
OUKITEL K8000, finday avo lenta mahatalanjona izay tsy handoavanao vola mandritra ny dimy andro ary misy fiasa mendrika an-tampon'ny sehatra
Lazainay aminao ny masontsivana lehibe indrindra, miaraka amin'ny vidin'ny BlackBerry Motion vaovao, finday avo lenta feno tsy misy kitendry ara-batana.
Ny orinasa sinoa Huawei dia manamafy fa ny Huawei Mate 10 dia hampiditra bateria lehibe 4000 mAh miaraka amin'ny fizakantena mandritra ny tontolo andro
Ny OUKITEL K5000 vaovao miaraka amin'ny bateria 5000 mAh sy ny efijery 5,7 ″ dia hamidy amin'ny faran'ny volana
Ny OUKITEL K5000 vaovao dia hamely ny tsena amin'ny faran'ny volana oktobra miaraka amin'ny efijery FHD 5,7-inch ary bateria 5000 mAh, famahanana haingana ary maro hafa.
Amazfit Midong Band, efijery loko ary bateria lehibe
Miverina i Xiaomi mba gaga antsika amin'ny brasele mahagaga, ny Amazfit Midong Band, miaraka amin'ny efijery miloko ary bateria hatramin'ny 12 andro iainana
Lenovo K8 Plus miaraka amin'ny fakantsary roa sy tany bateria 4000 mAh any India
Ny orinasa Lenovo dia manolotra smartphone roa vaovao any India, izy io dia ny Lenovo K8 Plus, amidy anio, ary ny Lenovo K8, amidy "tsy ho ela"
Raiso ity bateria Xiaomi Redmi 4X 3 GB + 32 GB sy 4100 mAh ity amin'ny € 99,53 fotsiny
Ankehitriny ianao dia afaka mahazo ny smartphone Xiaomi Redmi 4X mahafinaritra miaraka amin'ny RAM 3GB, fitehirizana 32GB ary bateria 4100 mAh latsaky ny 100 euro
Ny ZTE Blade Z Max dia mitondra fakan-tsary roa, bateria 4080mAh ary efijery goavambe $ 130
ZTE vao haingana no nanambara ny mpandimby ny Zmax Pro, antsoina hoe Blade Z Max. Izahay dia manambara ny mason-tsivana teknika rehetra sy ny toerana ahafahanao mividy azy.
Samsung manimba ny 3% amin'ny tahiry bateria isam-bolana ho an'ny fiarovana ny mpampiasa
Mba hiantohana ny fiarovana ny mpampiasa, ary aorian'ny tranga Galaxy Note 7, Samsung manimba ny 3% ny tahiry bateria isam-bolana
Toy izao no iaretan'ny bateria finday finday amin'ny fahavaratra
Fantatrao ve fa amin'ny fahavaratra dia mety hiharatsy ny baterian'ny finday avo lenta? Ny mari-pana ambony no fahavalonao lehibe
OUKITEL K10000 MAX, finday avo lenta tsy mampino miaraka amin'ny bateria 10.000 mAh
Ny OUKITEL K10000 MAX dia terminal natao ho an'ireo tia hetsika ivelan'ny trano, miaraka amin'ny fitaovam-piadiana ara-tafika ary bateria 10.000 mAH
Panasonic P55 Max miaraka amin'ny bateria 5000mAh natomboka tany India
Azo zahana any India izao ny Panasonic P55 Max, finday avo lenta finday midadasika midadasika miaraka amin'ny bateria 5.000 mAh sy Android 7.0 Nougat
Asus dia mamoaka ny ZenFone 4 Max miaraka amina fakan-tsary roa sy bateria 5.000 XNUMX mAh ao Rosia
Gaga ary tsy nisy fampandrenesana, nandefa ny Asus ZenFone 4 Max vaovao any Rosia i Asus, ambaratonga midadasika miaraka amin'ny bateria 5.000 mAh sy fakan-tsary roa
Ny smartphone miaraka amin'ny bateria lehibe indrindra manerantany dia nihatsara kokoa
Ny telefaona misy bateria lehibe indrindra eto an-tany, ny Oukitel K10000 Pro, dia havaozina miaraka amin'ny teknolojia mamaly haingana sy RAM 3GB.
Ny vahaolana amin'ny olan'ny bateria Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Vahaolana ara-toekarena izay misy fonosana batery amin'ny vidiny paosy.
Xiaomi dia mandefa ny Mi Max 2 miaraka amin'ny bateria 5.300 mAh ary amin'ny 220 euro fotsiny
Xiaomi dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny phablet Mi Max 2 miaraka amin'ny efijery 6,44 ", bateria 5.300 mAh, fakan-tsary Sony ary maro hafa avy amin'ny 220 euro fotsiny
Voamarina! Ny Moto Z2 PLay dia hanana bateria 3.000 mAh
Ny firm Lenovo dia manamafy fa ho tonga miaraka amin'ny bateria 2 mAh ny Moto Z3000 Play, 17 isan-jato kely noho ny maodely XNUMX
Ireo no finday avo lenta Android manana androm-piainana tsara indrindra
Androany aho mitondra safidy aminao miaraka amin'ny sasany amin'ireo finday avo lenta Android izay manolotra androm-piainana lava kokoa sy fahaleovan-tena bebe kokoa
ZTE Max XL, finday avo lenta tsara misy bateria lehibe amin'ny vidiny 120 euro fotsiny
ZTE Max XL vaovao dia finday avo lenta finday miaraka amin'ny efijery 6 ", bateria 3990 mAh amidy amina 120 euro fotsiny any Etazonia.
Gionee M6S Plus, ny finday avo lenta miaraka amin'ny bateria 6.020 mAh
Ny Gionee M6S Plus vaovao dia phablet 6-inch izay manasongadina ny bateriny 6.020 mAh goavambe miaraka amin'ny fizakan-tena mandritra ny roa andro
Ny Galaxy S8 + dia manana famolavolana bateria mitovy amin'ny Galaxy Note 7
Ny batterie an'ny Galaxy S8 + dia mitovy amin'ny an'ny Note 7, izay hanamafy ny fanazavana fa ny olana dia vokatry ny lesoka fa tsy ny endrika
Android Nougat 7.1.2 dia hampiditra fampandrenesana fampiasana bateria, fanatsarana ny fifandraisana ary maro hafa
Navoaka ny Android Nougat 7.1.2 ary efa navoaka ho an'ny fitaovana Google Pixel sy Nexus. Miaraka…
Ny mpamorona ny bateria lithium dia mamorona matanjaka kokoa
John Goodennough, rain'ny bateria lithium azo averina ankehitriny, ao amin'ny 94 no ao ambadiky ny famoronana bateria vaovao.
Ulefone Power 2 dia hanisy bateria 6050 mAh
Ity ny Ulefone Armor 2, finday vaovao Ulefone izay misongadina noho ny batterie 6050 mAh mahavariana sy RAM 4 GB
LG dia manambara ny X Power2, finday avo lenta izay miavaka amin'ny bateria lehibe ananany
Ny orinasa Koreana Tatsimo LG dia nanambara ny LG X Power2, finday avo lenta ambany nefa miaraka amina bateria goavambe manome fizakantena malalaka.
Ny Galaxy S8 dia hanana bateria mitovy habe amin'ny Galaxy Note 7
Ny maodely Galaxy S8 Plus an'ny Samsung 6,2-inch dia mety hampiditra bateria mitovy amin'ilay an'ny Note 7, miaraka amin'ny 3.500mAh
Ny iray amin'ireo orinasa Samsung tompon'andraikitra amin'ny bateria Note 7 dia may
Nirehitra ny afo tao amin'ny iray amin'ireo ozinina Samsung SDI, zanaky ny mpanamboatra tompon'andraikitra amin'ny famokarana bateria ho an'ny Note 7 sy Galaxy S8
Samsung dia miresaka amin'ny mpamatsy bateria Japoney ho an'ny Galaxy S8
Satria marobe ireo singa amin'ny Galaxy S8 no antenaina hamidy, Samsung dia miresaka fa hanana mpamatsy bateria hafa; Japoney izao.
Androany dia manolotra Android Launcher vaovao izahay izay hanampy anao hitahiry bateria betsaka amin'ny Smartphone. Mpandefa maimaim-poana tsy misy doka anatiny.
Samsung dia manamafy ny batterie no nahatonga ny fipoahana Galaxy Note 7
Samsung dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa ny batery dia nahatonga ny firehetan'ny Galaxy Note 7, ary nanambara ny fepetra fiarovana azo antoka kokoa
Ny "habe tsy ara-dalàna" an'ny bateria, mety ho antony nahatonga ny afon'ny Galaxy Note 7
Samsung dia hanondro ny haben'ny bateria sy ny lesoka tsy ara-dalàna satria nahatonga ny tsy fahombiazan'ny Galaxy Note 7
Izy ireo dia mamorona bateria hisorohana ny famerenana ny afon'ny Galaxy Note 7
Ekipa mpikaroka ao amin'ny anjerimanontolo Stanford dia namorona rafitra iray hisorohana ny bateria lithium-ion tsy hirehitra toy ny ao amin'ny Note 7
Ny famotopotorana Samsung dia mamarana ny bateria ho tompon'antoka amin'ny fahamaizana Galaxy Note 7
Nanatsoaka hevitra i Samsung fa ny bateria no tena tompon'antoka tamin'ny fipoahana sy ny afo nitarika ny fahatsiarovana farany ny Galaxy Note 7
Atsaharo indray izao ny Facebook sy Messenger, manondraka ny bateria izy ireo noho ny lesoka
Raha nahatsikaritra ianao fa tato ho ato dia lany bateria ny findainao taloha kokoa noho ny mahazatra, dia noho ny Facebook sy Messenger. Manazava ny fomba hamahana izany izahay.
Samsung Galaxy S8 dia hampiasa batterie mitovy amin'ny Note 7
Ilay mpanamboatra Koreana Samsung dia tokony hanana antoka tsara fa hampiasa bateria mitovy amin'ilay an'ny Galaxy Note 7.
Samsung dia hametra ny batterie an'ny Galaxy Note 30 ka hatramin'ny 7% any Eropa
Manomboka amin'ny faha-15, Samsung dia handefa fanavaozana any Eropa izay hametra ny fiampangana ny Galaxy Note 7 ka hatramin'ny 30 isan-jato fotsiny
ZTE dia manambara ireo finday avo lenta findainy bateria: ny Blade A610s sy A610 Plus
Raha mitady terminal misy fizakantena lehibe ianao, dia mendrika ny iray amin'ireo roa natolotry ny ZTE, toy ny Blade A610s sy A610 Plus.
Ny Meizu M5 Note dia ofisialy ankehitriny miaraka amin'ny efijery 5,5 ″, RAM 4GB ary bateria 4.000 mAh
Ny Meizu M5 Note dia terminal mahaliana amin'ny vidiny ambany izay misy efijery 5,5 ", RAM 4GB ary bateria 4.000 mAh.
Nambaran'ny manam-pahaizana fa manify loatra amin'ny bateria ny Galaxy Note 7
Orinasa mpamolavola fitaovana, nanao fomba fijery nipoaka ny Note 7 hamintinana fa manify ny terminal, zara raha namela ny bateria "miaina"
Tsy ho ela dia hisy bateria faran'izay mahery izay hihena segondra ary haharitra 20 heny noho ny ankehitriny
Ny haitao super batterie vaovao dia tonga amin'ny hazavana izay miakatra segondra ary haharitra hatramin'ny 20 heny intsony raha tsy misy fahasimbana na fako.
Quick Charge 4.0 dia ofisialy izao: fihenan'ny bateria bebe kokoa ao anatin'ny fotoana fohy
Quick Charge 4.0, ankoatry ny fanatsarana ny hafainganam-pandeha raha oharina amin'ny 3.0, dia misy fepetra mahaliana momba ny filaminan'ny terminal.
Fanalahidy hikarakarana ny baterian'ny findainao
Manolotra toro-hevitra azo ampiharina izahay mba hahafahanao mitandrina ny batterin'ny findainao ary haharitra kokoa nefa tsy hiharatsy. Ary raiso ireo lesoka mahazatra.
Samsung dia handefa fanavaozana ny Galaxy Note 7 izay mametra ny bateria ho 60%
Samsung dia handefa fanavaozana ny Galaxy Note 7 mampihena ny fahafahan'ny bateria hatramin'ny 60% hanery ny fiverenan'ny terminal sisa
Huawei dia mandefa ny Fit, azo ampiasaina amin'ny fiainana bateria manaitra
Raha mitady akanjo azo ampiana ianao izay manampy anao hitazona ho salama sy salama ara-batana, ny Huawei Fit miaraka amin'ny bateria 6 andro no mety indrindra
Ny Meizu Pro 6S miaraka amina fakan-tsary vaovao sy bateria lehibe kokoa dia ofisialy izao
Mikasika ny Pro 6, ny Meizu Pro 6s dia fanavaozana amin'ny singa roa lehibe indrindra amin'ny telefaona: ny bateria sy ny fakan-tsary.
Tsy fahombiazan'ny bateria Nexus 6P amin'ny Android Nougat
Ny mpampiasa sasany dia mitatitra olana vitsivitsy momba ny bateria amin'ny Nexus 6P rehefa nanatsara ny Android 7.0 Nougat izy ireo.
Ulefone Tiger, finday avo lenta misy batterie 4.200mAh, izay mitentina € 86,19 €
Ulefone Tiger dia efa amidy mialoha ary mety ho anao amin'ny € 86,19 raha amidy hatramin'ny 29 Oktobra. Telefaona misy batterie 4.200 mAh
Huawei dia manambara ny Ankafizo 6, smartphone 5 ″, batterie 4.100mAh ary RAM 3GB
Ny batterie 4.100 mAh izay atolotry ny Huawei Enjoy 6, ho an'ny telefaona misy efijery 5 ", manome anao fahaleovan-tena lehibe.
Samsung dia mihevitra ny fampiasana batterie LG ho an'ny Galaxy S8
Samsung dia mitady mpanamboatra hanome batterie ho an'ny Galaxy S8 manaraka, anisan'izany i LG, mpifaninana mivantana aminy.
Samsung dia nanandrana ny bateria Galaxy Note 7 "an-trano"
Mety tsy fantatsika mihitsy ny zava-nitranga tamin'ny fipoahana ny Galaxy Note 7, satria tsy mbola nahita ny antony ny orinasa Koreana.
Ny fanoloana Galaxy Note 7 dia mbola misy tsy fahombiazan'ny bateria, na dia tsy mipoaka intsony aza izy ireo
Mitohy ny nofy ratsy nataon'i Samsung. Ny Galaxy Note 7 izay misolo toerana dia mbola manohy mampiseho olan'ny bateria, na dia amin'ity tranga ity aza dia tsy dia matotra loatra izany
LeEco Le Pro 3 dia ofisialy miaraka amin'ny Snapdragon 821, RAM 6GB ary bateria 4.070 mAh amin'ny $ 299
LeEco Le Pro 3 dia iray amin'ireo telefaona Android izay manana RAM 6GB, manasongadina ny puce Snapdragon 821, ary esoriny ilay jack audio 3,5mm.
Samsung dia nahazo alalana manokana avy amin'i Google hanova ny kisary bateria maitso an'ny Note 7
Misaotra an'io sary masina bateria maitso io azonao atao ny milaza raha azo antoka na tsia ny fitaovana Samsung Galaxy Note 7. Nangataka alalana tamin'i Google i Samsung.
Samsung dia nanambara ny Galaxy A9 Pro miaraka amin'ny efijery 6 ″ sy bateria 5.000 mAh
Ny Galaxy A9 Pro no phablet vaovao an'ny Samsung izay niavaka noho ny fananany bateria 5.100 mAh sy ny efijery 6-inch.
Zahao ny androm-piainan'ny finday avo lenta amin'ny alàlan'ny Energy Bar
Energy Bar dia rindrambaiko izay tsy mila miorim-paka ary mamela anao manampy bara marindrano ao anaty bara misy ny toe-batana mampiseho ny androm-piainany.
Nanazava i Samsung ny antony mahatonga ny bateria Galaxy Note 7 hirongatra hipoaka
Tonga eo alohan'izay i Samsung haneho hevitra momba ny antony nipoahan'ny bateria Galaxy Note 7 rehefa voampanga ny finday.
Ny sary tafaporitsaka an'ny Xiaomi Redmi 4 dia miseho miaraka amin'ny efijery 5 ″ 1080p, RAM 3GB ary bateria 4.000 mAh
Sary roa tafaporitsaka an'ny Xiaomi Redmi 4 no niseho izay haseho mandritra ny herinandro ho avy ny mpanamboatra sinoa
Ahoana no hahalalana raha tsy mandeha ny baterian'ny Galaxy Note 7 anao
Raha te hahafantatra ianao raha manana ny iray amin'ireo bateria tsy mandeha avy amin'ny Samsung SDI ny Galaxy Note 7 dia araho ny dingana etsy ambany
Ny Galaxy Note7 dia tsy hitondra batterie Samsung SDI intsony
Ny Galaxy Note 7 dia tsy hampiasa batterie Samsung SDI intsony amin'ireo ambiny sisa izay mbola haparitaka aorian'ny olana goavana amin'ny fipoahana.
Meizu M3 Max no terminal vaovao an'ny orinasa sinoa vao natolotra tao amin'ny fireneny ary ho tonga, amin'ny takalo, 245 dolara.
Ny LG V20 dia tsy ho modular fa hanana bateria azo esorina
Ny LG V20 dia telefaona mamela anao hanolo ny batery hafa, fa tsy hanana lafiny maodely tahaka ny nataon'i G5.
Moto M dia mamakivaky ny TENAA manolotra efijery 5,5 ″, RAM 3GB ary bateria 3.000 mAh
Moto M no ho smartphone finday avo lenta manaraka an'i Lenovo ary efa namakivaky ny TENAA izao miaraka amin'ny efijery 5,5 ", RAM 3GB ary bateria 3.000 mAh.
Xiaomi Redmi Note 4 izao dia ofisialy miaraka amin'ny efijery 5,5 ″, Helio X20 ary bateria 4.100 mAh
Xiaomi dia nanambara ny Xiaomi Redmi Note 4 miaraka amin'ny efijery 5,5 ", puce Helio X20 ary bateria 4.100 mAh ho an'ny telefaona mihoatra ny $ 135
Fampiharana 5 hanatsarana ny batterie ary hahazo izany fanampiny tadiavinao isan'andro izany
Ireo fampiharana 5 ireo dia hanampy anao hanatsara ny batterie mba hahomby kokoa mandritra ny andro mba hahafahanao milalao an'io Pokémon GO.
Ny ZTE ZMax pro izao dia ofisialy miaraka amin'ny efijery 6 ″ FHD ary bateria 3.400 mAh amin'ny $ 99
ZTE dia nanolotra smartphone finday iray manontolo miaraka amina famaritana fitaovana tena tsara ary tonga amin'ny vidiny mirary $ 99.
Voasivana fa ny Xiaomi Redmi Note 4 dia hanana puce Helio X20 sy bateria 4.100 mAh
Misaotra ny boaty Redmi Note 4 azontsika atao ny mahafantatra ny sasany amin'ny famaritana ny Xiaomi Redmi Note 4 vaovao izay haseho amin'ny 27 Jolay
Batterie ivelany 5 hampihenana ny findainao finday mandritra ny filalaovana Pokémon GO
Pokémon GO mandany hery bateria be loatra rehefa mihaza Pokémon. Ireto banky herinaratra miisa 5 ireto dia ho mora ampiasaina hanamaivanana ny fanjifana
Torohevitra roa ilaina amin'ny fanatsarana ny androm-batterin'ny finday avo lenta rehefa milalao Pokémon GO, lalao video izay mampiasa GPS, efijery ary fakan-tsary
ANDROID ALERT !!, mety ho tandindomin-doza ny data Android anao rehefa mameno ny bateria izahay
Manome torohevitra vitsivitsy anao izahay anio mba tsy atahorana ny angon-drakitra amin'ny Android anao rehefa ampiakarinay ny baterian'ny terminal amin'ny alàlan'ny PC na MAC.
ZTE dia manambara ny nubia N1 miaraka amin'ny efijery 5,5 ″, fakan-tsary 13MP ary bateria 5.000 mAh
Ny ZTE nubia N1 vaovao dia nambara fa haseho ho fitaovana iray izay hahatratra bateria telo andro amin'ny fampiasana antonony.
[ROOT] Ahoana ny fomba fampiarahana ny maody Doze amin'ny Android Marshmallow miaraka amin'i Naptime
Naptime dia fampiharana ROOT izay manampy antsika hanao fanahafana fanampiny amin'ny maody Doze izay hita ao amin'ny Android 6.0 Marshmallow
Ny fitantanana RAM hafahafa an'ny OnePlus 3 dia ny fanohanana ny fiainana bateria
Ny fanapaha-kevitra ho an'ny OnePlus 3 tsy hampiasa ny 6GB RAM dia mba tsy hampiasa be loatra ny fahaizan'ny baterian'ny terminal.
Huawei dia nanambara Honor 5A miaraka amin'ny efijery HD 5,5 ″ HD sy bateria 3.100 mAh
Huawei dia mampiditra terminal vaovao ao amin'ny repertoire-ny miaraka amin'ny Honor 5A miaraka amin'ny efijery 5,5 HD ary fakan-tsary roa mahaliana eo anoloana sy ao aoriany.
Ahoana ny fomba hitsitsiana bateria amin'ny Android M amin'ny alàlan'ny fanerena ny maody Doze. Mitahiry bateria hatramin'ny 40% !!
Androany izahay dia manazava tsikelikely ny fomba fitehirizana bateria amin'ny Android M amin'ny alàlan'ny fanerena ny mode Doze hahatratra 40% fitehirizana bateria.
ES File Explorer nony farany dia nanala ny doka bateria manafika
Farany ny ekipa fampandrosoana ES File Explorer dia nanala ny bokotra "Charging Boost" izay nampidiriny tao amin'ny fanavaozana farany.
Xiaomi dia nanambara an'i Mi Max miaraka amin'ny efijery 6,4 ″, RAM 4GB ary bateria 4.850mAh
Xiaomi dia mandefa ny Mi Max vaovao miaraka amin'ny efijery 6,4 ", karazany maromaro amin'ny chip / RAM / memo anatiny ary bateria 4.850 mAh.
Ny HTC 10 dia hanana efijery Super LCD 5 sy bateria 3.000 mAh
Raha ny filazan'i @evleaks, ny HTC dia hanana efijery Super LCD 5 sy bateria 3.000 mAh, ka hamafana ny tsaho momba ny Super AMOLED.
Ny Oppo's Super VOOC dia mitaky batterie 2.500mAh ao anatin'ny 15 minitra
OPPO dia nanambara ny Super VOOC avy amin'ny MWC ho haitao haingam-pandeha haingana izay hameno bateria 2.500mAh ao anatin'ny 15 minitra.
Ny processeur Mediatek Helio P20 vaovao dia afaka manatsara ny fizakantenan'ny finday antonony amin'ny alàlan'ny fisorohana ny enta-mavesatra isan'andro.
Lenovo dia mampiseho an'i Vibe P1 Turbo miaraka amin'ny efijery 5,5p 1080-inch sy bateria 5.000 XNUMX mah
Raha mitady telefaona misy efijery 5,5 "sy bateria 5.000 mAh ianao, angamba ny Lenovo Vibe P1 Turbo no mety indrindra
Orinasa britanika miasa amin'ny batterie ho an'ny finday avo lenta izay haharitra 7 andro
Orinasa britanika miasa mafy mamorona bateria mety haharitra 7 andro. Ny tsiambaratelonao? ny fampiasana solika.
Samsung Galaxy S7 bateria fiainana maharitra maharitra roa andro amin'ny fiampangana tokana [havaozina]
Nisy sary iray tafaporitsaka mampiseho ny androm-piainan'ny Samsung Galaxy S7 izay hahatratra roa andro tsy misy ahiahy
Raha ampitahaina amin'ny telefaona lehibe hafa eo amin'ny efijery, ny LG V10 dia tsy mandrefy araka ny fitsapana natao
Ulefone Power finday 5,5 santimetatra miaraka amin'ny bateria 6.050mAh goavana amin'ny $ 180
Raha mitady terminal izay mahatratra efatra andro ny fizakan-tena ianao, ny Ulefone Power dia ho anao miaraka amin'ny bateria 6.050mAh
Ny fampiharana Facebook amin'ny Android dia manimba ny fanjifana ny bateria sy ny loharano finday. Afaka manohy manana Facebook avy amin'ny tranonkala ianao.
Manatsara ny fiainanao bateria Android amin'ny Battery Time Optimizer
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia manolotra soso-kevitra mampihetsi-po aho izay hanampy anay hanatsara ny androm-piainan'ny terminal Android anay.
ZTE dia manambara ny Blade D Lux miaraka amin'ny fampisehoana HD 5,5-inch, RAM 2GB ary bateria 3.000mAh
$ 166 eo ho eo dia azonao atao ny mividy an'ity ZTE Blade D Lux ity izay mety ho lasa iray amin'ireo smartphone ho fanitarana iraisam-pirenena.
Xiaomi Redmi 3 dia nanambara tamin'ny efijery HD 5-inch, Snapdragon 616 ary bateria 4.100mAh amin'ny $ 106
Xiaomi Redmi 3 dia miavaka amin'ny efijery 5-inch, puce Snapdragon 616 octa-core ary batterie 4.100 mAh
Ahoana ny fomba hahazoana haingana ny statistikan'ny bateria amin'ny Android Marshmallow sy ny fitaovana Lollipop
Asehonay aminao ny fomba hidirana haingana amin'ny statistikan'ny baterian'ny telefaona Android anao amin'ny alàlan'ny kinova Marshmallow sy Lollipop
Samsung Galaxy A9 izao dia ofisialy: efijery 6 ″, puce octa-core ary bateria 4.000mAh
Androany ny Samsung Galaxy A9 dia ofisialy, izay ho avy hamita ny andiany A, izay misy ny Galaxy A3, Galaxy A5 ary Galaxy A7.
Sony dia mamorona bateria miorina amin'ny solifara miaraka amin'ny fanatsarana 40% ny fizakantena
Ny bateria miorina amin'ny solifara noforonin'i Sony dia manome valiny 40% avo kokoa amin'ny inona ny fizakantenany.
Oukitel K10000, bibidia manana bateria 10.000 mAh
Oukitel K10000, fitaovana iray misongadina amin'ny batterie mahavariana 10.000 mAh izay mampanantena fizakan-tena 10 andro.
Betsaka ny sary an'ny Galaxy A9 no voasivana izay hisehoan'ny efijery 6 ″ sy bateria 4.000mAh
Samsung Galaxy A9 dia mamita ny andiany A 2016 ho toy ny smartphone izay ho tonga amin'ny efijery 6-inch, amin'ny antsointsika hoe phablet
Oppo dia nanambara ny Oppo A53 miaraka amin'ny efijery 5,5 ″, puce Snapdragon 616 ary bateria 3.075mAh
Oppo dia nanambara ny A53, finday avo lenta izay mampiasa ny efijery 5,5-inch, ny batterany 3.075 mAh ary ny chip Qualcomm 616 octa-core.
Ireo no rindranasa sy serivisy 10 izay mandany ny baterian'ny Android-nay indrindra araka ny AVG
Ireo no rindranasa sy serivisy 10 izay mandany ny bateria amin'ireo terminal Android anay indrindra.
Ny fampiharana Doze dia mitondra ny lozisialy fitehirizana bateria Marshmallow amin'ny findainao amin'ny Lollipop
Doze dia fampiharana iray izay mikarakara ny fanatsarana ny baterin'ny Marshmallow amin'ny findainao amin'ny Lollipop.
Ahoana ny fanamboarana sy fanamafisana ny batterie Android anao, manan-kery ho an'ireo mpampiasa Root sy No Root
Anio dia asehonay anao tsikelikely ary miaraka amin'ny fanampian'ny lesona an-dahatsary, fomba roa hanamboarana sy hanamafisana ny bateria amin'ny Android, Valid for Root ary No Root.
Xiaomi dia mandefa banky bateria 20.000 2.0 mAh miaraka amin'ny Quick Charge 24 amin'ny $ XNUMX
Banky famatsiam-bola 20.000 24 avy amin'i Xiaomi manodidina ny XNUMX dolara hanovana hanomezana ny bateria ilaina rehetra amin'ny findainao.
Ny banky bateria Lumsing 10.400 mAh amin'ny € 19,99 amin'ny Amazon
Banky bateria 10.400mAh izay avy amin'i Lumsing amin'ny vidiny € 19,99 dia mety ho fitaovana tsara indrindra hahatongavana amin'ny andro bateria.
Nomad dia manambara kitapom-batsy amin'ny fametahana bateria 2400mAh
Nomad dia nanangana kitapom-bola ahafahanao mameno ny findainao amin'ny bateria 2.400 80 mAh amin'ny vidiny manodidina ny XNUMX $.
Ion Belt, ento manodidina ny andilanao ny batterieo miaraka amin'ity fehikibo manokana ity
Ion Belt dia tetik'asa vaovao ao amin'ny Kickstarter izay mikendry ny hameno ny findainao amin'ny fehin-kibonao.
[ROOT] Fampiharana roa hanamboarana ny endrika Doze ho an'ny amponga an'i Marshmallow
Rindrambaiko roa izay manararaotra Doze tanteraka, ny fiasa vaovao an'ny Android 6.0 Marshmallow hanatsarana ny androm-piainan'ny terminal.
Ny Xperia Z5 dia manantena ny fitomboan'ny bateria lehibe miaraka amin'ny Stamina Mode amin'ny Android 6.0 Marshmallow
Miaraka amin'i Doze sy Sony's Stamina Mode, ny Xperia z5 dia hanasongadinana Android 6.0 Marshmallow miaraka amin'ny fiainana bateria lehibe.
Ny fitehirizana bateria amin'ny Android anao dia azo atao raha Root ianao, hazavainay ny fomba hahazoana azy io mora foana
Androany dia manazava amin'ny mpampiasa Root izahay, ny fomba fitehirizana bateria amin'ny Android anao amin'ny alàlan'ny fampidinana ny fatrany ambony indrindra amin'ny processeur an'ny terminal Android anao nefa tsy very ny zava-bitany.
Ny fampiharana media sosialy no mandany bateria betsaka indrindra araka ny AVG
AVG dia nandefa fanadihadiana mampiseho ireo fampiharana 10 izay mandany ny androm-piainany indrindra ary misy fiatraikany amin'ny zava-bita.
Fanesorana ny angano bateria amin'ny finday avo lenta
Nanazava ny iray amin'ireo lohahevitra nahatonga ny tadim-poitra indrindra izahay hatramin'ny nahazoantsika finday avo lenta, fiainana bateria ary angano sy angano.
Ny fampiharana tsara indrindra hitehirizana bateria amin'ny Android
Androany aho manolotra anao fa ny tsiriko manokana no App tsara indrindra hamonjy bateria amin'ny Android.
Ny famoahana Huawei 6P vaovao dia manamarina ny sasany amin'ireo antsipirihany: bateria 3.450 mAh sy vatana vy
Miaraka amin'ny fahaizan'ny bateria Huawei 6P fantatra, fahaleovan-tena lehibe no antenaina ho tonga amin'ny andro na mihoatra aza fa tsy mila mandoa vola.
HOMTOM HT6, ilay Smartphone Doogee vaovao miaraka amin'ny bateria 6250 mAh lehibe mampanantena 3 andro nefa tsy andoavana izany amin'ny fampiasana mahery vaika
Doogee dia mampahafantatra antsika ny fanombohana ny HOMTOM HT6, terminal vaovao izay eo ambanin'ny marika kely misy bateria 6250 mAh lehibe izay mampanantena fahaleovan-tena lehibe.
Vetivety dia haingana ny bateria mety haharitra ny ain'ny fitaovana
Ny haitao vaovao momba ny electrolyte vaovao dia mety hitarika bateria mety haharitra mandritra ny androm-piainany
Batterie vaovao misy fizakan-tena mandritra ny herinandro
Ny bateria manana fizakan-tena mandritra ny herinandro dia efa tena izy ary afaka manova ny tontolon'ny teknolojia finday
Doogee dia nanambara ny Doogee Y100 Plus
Nanambara finday vaovao i Doogee, ny Doogee Y100 Plus. Fantsona manatsara ny fitaovana Y100 satria hanana efijery sy bateria bebe kokoa izy
CPU Spy Reloaded, fampiharana Material Design hamantarana ny fanjifana bateria avo sy ny hafanana be loatra
CPU Spy Reloades dia fampiharana Material Design izay manampy antsika hahafantatra ny angona GPU, CPU ary bateria ary koa ny fampahalalana momba ny fitaovana.
Ireo bateria ao amin'ny terminal Samsung dia misy mikrô miafina. Ah tsia, chip NFC izany!
Hamitaka vaovao iray no milaza fa misy bateria miafina ao amin'ny baterin'i Samsung: tsy misy zavatra mety ho lavitra ny marina. Mampiditra chip chip NFC izy ireo.
Olana amin'ny bateria Samsung Galaxy S4? Ireto misy torohevitra vitsivitsy hanery kely kokoa
Amin'ity lahatsoratra ity dia manome anao vahaolana vitsivitsy momba ny olan'ny bateria amin'ny Samsung Galaxy S4 ary koa ny safidy fividianana tsara indrindra.
Tsaho momba ny bateria Motorola DROID 2 4.200mAh ho avy, Snapdragon 810?
Ny tsaho voalohany momba ny Motorola DROID 2. manaraka dia fantsona mety ho tonga miaraka amin'ny bateria 4.200 mAh sy Snapdragon 810.
Red Pepper 9, finday sinoa miaraka amin'ny bateria 5000 mAh
Misy finday avo lenta sinoa manintona ny saintsika, toy ny Beidou Red Pepper 9, terminal chine mampiditra bateria 5000 mAh.
Torohevitra fahita mahazatra hitsimbinana ny androm-piainany amin'ny Android
Androany aho manazava aminao amin'ny alàlan'ny firesahana, toro-hevitra vitsivitsy amin'ny fahatsapana fahadiovam-po madio indrindra izay hahafahantsika manangona bateria amin'ny Android tsy mila fampiharana an'ny antoko fahatelo.
Android M dia mampiditra lohahevitra maizina hamonjy bateria
Iray amin'ireo tena manintona ny fihaonambe farany an'ny Google developer, ny Google I / O 2015,…
Bluboo X550, terminal misy batterie 5.300mAh
Bluboo X550 dia iray amin'ireo fitaovana voalohany hanana bateria lehibe, manokana dia 5.300 mAh.
Ny Elephone P4000 dia haseho rahampitso miaraka amin'ny bateria 4.800 mAh
Elephone dia iray amin'ireo mpanamboatra sinoa mamoaka fitaovana misy fampiasa tsara amin'ny vidiny mamaky tany. Rahampitso dia aseho ny Elephone P4000.
Fomba fampiasana ny Launcher Lab, lesona 3: fampiasana endrika sy sary ary famoronana sary famantarana ny bateria
Amin'ity lesona fahatelo amin'ny fampiasana Launcher Lab ity dia asehonay anao ny fomba fampiasana endrika sy tarehimarika ary koa ny famoronana ny widget misy ny bateria manokana.
Mlais MX, finday avo lenta sinoa misy RAM 2 GB ary bateria 4.800 XNUMX mAh
Mlais dia fanombohana kely ao Shina izay te hiditra amin'ny tontolon'ny telefaona finday ary noho io antony io dia nanolotra fantsona vaovao, ny Mlais MX.
Lenovo K8 miaraka amin'ny RAM 4 GB sy batterie 4000 mAh
Raha tsy mbola fantatrao raha ho hitantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity, ny Lenovo K8 misy 4G RAM sy 4000 mAh dia hita fa mahaliana ho an'ny $ 290
Ny Qualcomm's Trepn Profiler dia mamantatra hoe iza amin'ireo rindrambaiko no mampiasa batterie, CPU ary data
Trepn Profiler dia rindrambaiko noforonin'i Qualcomm tenany hamantarana izay apps tsy mampiasa data, CPU ary bateria diso
Ampandehano ny jiro LED fakantsarinao mba hampandrenesana ny antso, ny hafatra ary ny toetran'ny bateria
Ny jiro fakan-tsary dia azo alefa amin'ny fampiharana hampandrenesana antso, hafatra na satan'ny bateria
Ny bateria Galaxy S6 Edge dia manatitra, araka ny Benchmarks
Ny batterie an'ny Galaxy S6 Edge, amin'ny 2600 mAh fotsiny, dia manome valiny tena tsara arakaraka ny fitsapana natao teny amin'ny terminal.
Na dia amin'ny ankapobeny aza ny Samsung Galaxy S6 dia tsy manana bateria azo idirana ho an'ny mpampiasa, ny mpampiasa dia afaka manova azy amin'ny fanazavana ao amin'ny boky torolàlana ho an'ny mpampiasa.
Ataovy maharitra kokoa ny baterinao Android amin'ny Amplify Battery Extender
Raha efa reraky ny baterinao finday ianao dia somary farany farany, ataovy iray amin'ireo tianao indrindra ity modely Xposed ity: Amplify Battery Extender
Ny bateria an'ny Samsung Galaxy S6 dia ho 2.600 mAh
Ny fampahalalana rehetra momba ny bateria Samsung Galaxy S6 dia voasivana, izay hanana 2.600 mAh.
Inona no azontsika antenaina amin'ny batterie amin'ny Android 5.0 Lollipop?
Azavainay ny antony mahatonga ny fiainana bateria lava kokoa amin'ny fitaovana iray misy Android 5.0 Lollipop
Ahoana ny fomba hamehezana ny batterie Android anao
Betsaka amintsika no tompon'ny smartphone izay ahitantsika olana isan'andro momba ny fiainana bateria, izay mety haharitra iray andro amintsika amin'ny tranga tsara indrindra. Fepetra iray hanamora ny asa ity dia ny fahalalana raha voamarina tsara ny baterin'ny fitaovantsika.
Nahemotra ny Android 5.0 OTA noho ny olana lehibe amin'ny fanjifana bateria
Ny Android 5.0 OTAs ho an'ny Nexus dia nihemotra noho ny olana lehibe amin'ny fanjifana bateria noho ny fampiasana ny fifandraisana WiFi
Jawbone dia mandefa ny Up Move, isa manokana ho an'ny bateria € 49,99 sy 6 volana
Ny Jawbone Up Mov dia mpamaky isa manokana misy refy kely, mety tsara amin'ny famoizana lanja sy fitazonana endrika.
Araho ny toetoetran'ny bateria amin'ny fitaovana marobe avy amin'ny fitaovana iray miaraka amin'ny Potential
Tolotra mety azo avy amina fitaovana iray hanaraha-maso ny satan'ny bateria amin'ireo fitaovana Android rehetra anananao. Hevitra mahaliana ao amin'ny beta.
Ny fiainana bateria Moto 360 smartwatch dia miampy roa miaraka amin'ny fanavaozana KGW42R
Ny fanavaozana KGW42R dia mampihena ny fiainana bateria raha tsy mandeha ny maodely Moto 360, mahatratra 30 ora ny fahaleovan-tena
Sony Xperia Z3 sy Z3 Compact dia mamaky ny rakitsoratra rehetra amin'ny androm-piainana
Tsy misy olona manakaiky azy raha ny bateria no resahina ary izy ireo dia ny Xperia Z3 sy Xperia Z3 Compact.
Ahoana ny fomba hitsitsiana bateria amin'ny LG G2 anao, hampiato ny safidy Fast Dormancy, manan-kery ho an'ny modely sy ny karazany rehetra
Amin'ity fikafika ity dia hamonjy bateria amin'ny LG anao amin'ny alàlan'ny fampiatoana ny safidy Fast Dormancy avy amin'ny menio serivisy
ZTE ZMAX, phablet tena ekonomika manana fizakan-tena mandritra ny roa andro
ZTE dia nanolotra ny ZTE ZMAX phablet miaraka amin'ny efijery 5.7-inch ary isan-karazany mandritra ny roa andro
Ary farany Android 4.4.4 ho an'ny Xperia Z miaraka amin'ny fanatsarana ny bateria sy ny fahombiazana avo lenta
Android 4.4.4 dia azo alaina avy amin'ny Vodafone France miaraka amin'ny fanatsarana bateria ary fahombiazana tsara kokoa amin'ny firmware 10.5.1.A.0.283
Hatsarao ny fahombiazan'ny bateria amin'ny Xperia Z miaraka amin'ny andiany vaovao an'ny Google Play Services [Download APK]
Ny fahombiazan'ny bateria amin'ny Xperia Z dia nihena hatramin'ny namoahana ny Android 4.4 KitKat. Fanatsarana miaraka amin'ny kinova vaovao an'ny Google Play Services
Ireto ambany ireto dia manazava ny vahaolana napetrak'i Sony ho an'ny fanjifana bateria ao amin'ny KitKat mihodina Xperia Z.
Ny sary vaovao an'ny LG G3 D855 dia mampiseho ny bateria sy ny slot microSD
Sarin'ny LG G3 miaraka amin'ny antsipiriany izay midika hoe manana bateria azo esorina sy karatra microSD
Ny bateria mahavariana an'ny Xperia Z2
Ny bateria Xperia Z2 eo am-pandinihana avy amin'ny GSMArena misy valiny mahavariana mandresy ny S5 sy One M8
Nampahafantatra ny OnePlus One: Snapdragon 801, RAM 3GB ary bateria 3100mAh amin'ny € 269 (16GB) ary € 299 (64GB)
Nampahafantatra ny OnePlus One miaraka amin'ny Snapdragon 801, RAM 3GB ary bateria 3100mAh izay hanitatra ny androm-telefaona
Charger iray izay mampiasa nanotechnology hamoahana ny bateria ao anatin'ny iray minitra? StoreDot no manana ny valiny
StoreDot dia orinasa iray izay mampiasa teknolojia nanotrika handoavana bateria finday iray latsaka ny iray minitra.
Ahoana ny fanitarana ny baterin'ny terminal Android anao (Tutorial for newbies)
Ny tsy fahaleovan-tena dia olana lehibe. Androany dia miverina miaraka amin'ny Tutorial for newbies izahay ary manazava ny fomba fanitarana ny baterin'ny terminal Android anao.
Notsapainay ny terminal Lenovo S860 misy bateria 4000mAh
Izahay dia ao amin'ny MWC 014 manandrana ny terminal Lenovo, indrindra ny S860 izay misongadina amin'ny batterie 4000mAh lehibe izay mampanantena fahaleovan-tena lehibe.
Samsung dia manambara ny Mode Power Ultra Saving: fiainana bateria 24 ora amin'ny sarany 10%
Mba hanahiran-tsaina bebe kokoa momba ny fizakan-tena, ao amin'ny MWC 2104, Samsung dia nanolotra ny Mode Ultra Power Saving ao amin'ny Galaxy S5, izay manome 24 ora amin'ny 10% amin'ny enta-mavesatra.
Firafitra Android 4.3 vaovao ho an'ny Xperia Z, ZL, ZR ary Tablet Z miaraka amin'ny fanatsarana ny batterie, Bluetooth ary maro hafa
Ireo mpampiasa Xperia Z, ZL, ZR ary Tablet Z dia hahazo Android Android 4.3 vaovao miaraka amina isa 10.4.1.B.0.101 amin'ny ora vitsy manaraka.
Samsung Galaxy S5 miaraka amin'ny bateria 2900 mAh
Ny tsaho momba ny bateria vaovao miaraka amin'ny teknolojia lithium-ion vaovao ho an'ny Samsung Galaxy S5 dia mivoaka.
Ampidiro Greenify hamonjy bateria amin'ny findainao tsy misy tombony amin'ny ROOT
Greenify dia rindrambaiko iray ahafahanao mitahiry bateria amin'ny alàlan'ny hibernation amin'ny dingana sasany ary hanatsara ny fampiasana azy. Tsy mila ROOT ianao hametrahana azy
Fanavaozana ny serivisy Google Play miaraka amin'ny fahombiazan'ny batterie tsara kokoa, Multiplayer miovaova, ary maro hafa
Google Play Services dia mandray kinova vaovao izay mitondra fanatsarana mahomby toa ny fahombiazan'ny bateria tsara kokoa sy ny fanohanana ny multiplayer miovaova turn.
Olana amin'ny Serivisy Google Play izay mamono ny baterinao Android
Ny olana iray ao amin'ny Google Play Services dia ny fanjifana bateria be loatra amin'ny terminal Android.
Inona no dikan'ny ART ho an'ny Android 4.4 amin'ny fanatsarana ny fahombiazany, ny fahaizany mandanjalanja ary ny androm-piainany
ART dia tetikasa iray izay niasan'ny Google nandritra ny roa taona mahery mba hampitomboana ny fahombiazana, ny fihenan'ny fiainana ary ny fiainana bateria amin'ny Android.
Olana bateria Samsung Galaxy S4 ho an'ny mpampiasa sasany
Galaxy S4 vaovao an'ny Samsung vaovao dia mahazo fitarainana momba ny olan'ny bateria ary io orinasa koreana io ihany no manitsy amin'ny fanoloana azy ireo.
Sony manatsara ny fiainana bateria sy fakantsary amin'ny Xperia Z1 sy Z Ultra
Sony dia namoaka firmware vaovao izay manatsara be ny fakan-tsary, ny fiainana bateria ary ny valin'ny fikasihan'ny efijery an'ny Xperia Z1 sy Z Ultra
Bateria azo entina Sony ho an'ny famahanana fitaovana
Sony dia nanolotra bateria azo entina handefasana fitaovana 5 sy 10 Ah mety tsara aleha amin'ny dia lavitra.
Galaxy Note 2 novaina tamin'ny fitehirizana 288GB sy bateria 9300mAh
Mpampiasa iray no nanova ny Galaxy Note 2 tamin'ny alàlan'ny fanampiana 288GB fitehirizana sy bateria 9300mAh, manadino tanteraka ny estetika hita maso.
Torohevitra Android (II): Ahoana ny fanatsarana ny bateria?
Ny bateria ao anaty terminal dia manan-danja satria ny fahaiza-manao dia hanondro ny fotoana haharetan'ny fitaovana ho antsika ankoatry ny loharanom-pahalalana azo.
Bateraha Samsung ofisialy fanampiny ho an'ny Galaxy S4
Samsung dia mandefa bateria fanampiny ofisialy ho an'ny variana rehetra amin'ny Galaxy S4, na dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana finday rehetra aza izy io.
Charger bateria mitovy habe amin'ny carte de crédit
Charger bateria iray mahaliana manana ny famolavolana carte de crédit $ 25 no natolotra teny an-tsena tato ho ato.
Misy finday mipoitra any Shina miaraka amin'ny bateria 5000 mAh
Ny telefaona finday sinoa dia manolotra efijery 4.5-inch sy bateria 5000 mA, hiantoka azy io ho mahia kely toa ny hafa.
Ny bateria Samsung Galaxy S4 dia hanana puce NFC
Voamarina fa hanana chip NFC ny Samsung Galaxy S4. Ho fanampin'izany, ity haitao ity dia hampidirina ao amin'ny baterin'ny fitaovana, izay ho 2600mAh.
Samsung Galaxy S3 dia mahazo bateria maharitra amin'ny Janoary
Telefaona finday avo lenta Samsung Galaxy S3 dia mahazo bateria vaovao lava
Batterie vaovao misy herinaratra indroa ho an'ny Samsung Galaxy Note 2
Ny bateria vaovao misy hery mitatra hampiakarana avo roa heny ny fahafaha-manao amin'ny Samsung Galaxy Note 2 dia efa namidy nanomboka ny 21 Desambra 2012.
Lenovo P770, bateria miasa mandritra ny 29 ora
Ny Lenovo P770 dia Smartphone amidy eo amin'ny tsena sinoa eo amin'ny $ 270, izay mampiavaka azy lehibe indrindra dia ny androm-piainany 3500mAh.
Samsung dia tsy hanome batterie ho an'i Apple intsony
Tapitra ny fiaraha-miasa amin'i Samsung rehefa tapitra ny fifanarahana nahafahany nanamboatra bateria ho an'ny takelaka sy fitaovana Apple hafa.